I-OnePlus Nord CE 5G ibhengezwe nge-Snapdragon 750G kunye nexabiso elifanelekileyo | Zonke iinkonzo ze-intanethi
UDaniPlay | 10/06/2021 17:56 | Ukuhlaziywa ukuba 11/06/2021 08:17 | Iiselfowuni, OnePlus
I-OnePlus ibhengeze ukuba loluphi uluhlu lwayo olutsha lokungena emva kwamahemuhemu amaninzi malunga neempawu zayo, ezenza ukuba kube yinto encinci enomtsalane. I-OnePlus Nord CE 5G yifowuni entsha enefuthe elikhulu ngaphandle kokungabinayo iprosesa yamva nje evela kumenzi weQualcomm.
I-Nord CE 5G ingena ngokupheleleyo kumgca weNord, ukuza kuthi ga ngoku yenzelwe zonke iintlobo zabasebenzisi, kunye ne-OnePlus Nord 5G njengenxalenye ebalulekileyo yosapho. Ukuhlonipha amanye amaxabiso, I-Nord CE ifika ukubonelela ngoqhagamshelo lwesizukulwana esilandelayo kunye nokusebenza ngexabiso lokhuphiswano.
Ngaba uyafuna ukwazi i Ixabiso eliphezulu esiliphumeleleyo yeyakho kwi-Nord CE 5G? Cofa apha kwaye ufumane le smartphone ngexabiso elifanelekileyo kunye nazo zonke iziqinisekiso
1 Iimpawu ze-OnePlus Nord CE 5G entsha
2 I-CPU enkulu, i-RAM yokugcina, yokugcina kunye nebhetri ephezulu
3 Iikhamera ezine zizonke
4 Ukudibanisa okuninzi kunye nohlobo lwamva nje lwesoftware
5 Ukukhanya kunye ne-compact
6 Ukufumaneka kunye nexabiso
Iimpawu ze-OnePlus Nord CE 5G entsha
Le modeli iqala ngaphambili ngokufaka ipaneli yohlobo lwe-6,43-intshi ye-AMOLED ngesisombululo esigcweleyo seHD +, ekuvumela ukuba ujonge umxholo okwinqanaba eliphezulu. I-OnePlus Nord CE 5G idibanisa i-HDR10 + kunye nereyithi yokuhlaziya ye-90 Hz, umyinge wama-20: 9 kunye nokukhuselwa kwescreen kukrwela.
Uyilo lwe-OnePlus Nord CE 5G ilumkile ngokweenkcukacha ezinkulu, isikrini sihlala ngaphambili nangaphandle kwayo nayiphi na i-bezel ebonakalayo ekuboneni kuqala, emazantsi kuphela indawo encinci ebonakalayo. Kwakhona, ifowuni ifika nekhamera yokubhoboza umngxunya phezulu ngasekhohlo.
I-CPU enkulu, i-RAM yokugcina, yokugcina kunye nebhetri ephezulu
Ifika inikwe amandla yi-Snapdragon 750G, i-chip eya kuyenza ukuba isebenze kwaye isebenze xa isetyenziswa kunye nokusetyenziswa, kunye nemidlalo yevidiyo. Imizobo yiAdreno 619, ilungile ukuba ufuna ukuhambisa imidlalo yevidiyo yamva nje kwintengiso, ukongeza ekwenzeni kwezinye izinto.
I-OnePlus Nord CE 5G inezinto ezintathu ezinokukhethwa kwimemori ye-RAM, Ephakathi kwe-6, 8 ukuya kwi-12 GB, kuxhomekeke kukhetho olukhethiweyo, iindleko ziya kuphakama ngoqwalaselo olungcono. Isantya se-RAM kufuneka siqinisekiswe, sibonisa ukuba iya kuba yi-LPDDR5X, ke iya kukhawuleza xa usenza imisebenzi.
Into ebalulekileyo kwizixhobo ezintsha zeselfowuni ngumthamo wokugcina, kwi-OnePlus Nord CE 5G iindlela ezimbini zokongezwa. Eyokuqala yazo yi-128 GB, ngelixa eyesibini iyilelwe ukugcina yonke into Uhlobo lolwazi, nokuba ziifoto, amaxwebhu kunye nemidlalo, ene-256 GB.
Ibhetri ye-OnePlus Nord CE 5G yenye yezona zinto zibalulekileyo, kuba enkosi kwiWarp Charge 30T Plus iya kubiza ukusuka kwi-0 kuye kwi-70% kwisiqingatha seyure kwi-30W. Imalunga ne-4.500 mAh, yanele ukunika ubomi obuluncedo imini yonke ngaphandle kokuhlawulwa ngokusetyenziswa kwesiqhelo. Ukulayishwa kuza kwibhokisi ekulungele ukuhamba.
Iikhamera ezine zizonke
Isixhobo esitsha se-OnePlus sinyusa iisenzi ezintathu ngasemva enye ngaphambili, ukugcina enye yazo njengeyona nto kugxilwe kuyo. Isivamvo esingasemva esona sentloko siyi-megapixel engama-64, yenye yezona zinamandla kwintengiso, eyesibini yi-megapixel ebanzi engama-8 ebanzi kwaye eyesithathu iyi-2 megapixel monochrome.
Njengomenzi woluvo kuphela ngaphambili, umngxuma owombiwe ngelensi ye-16-megapixel unokubonwa, ikuvumela ukuba uthathe iifoto zangaphambili, iiselfie, ukurekhodwa kwevidiyo kwaye kufanelekile ukuba ufuna ukwenza iinkomfa zevidiyo. Iirekhodi zekhamera kumgangatho opheleleyo we-HD, ke ilungile ukuba ufuna ukulayisha umxholo oqaqambileyo kwiinethiwekhi zentlalo kunye namanye amaphepha.
Ukudibanisa okuninzi kunye nohlobo lwamva nje lwesoftware
El I-OnePlus Nord CE 5G ifike ixhotyiswe kakuhle ngezinto zamva nje, kubandakanya unxibelelwano lombulelo kwinto yokuba iya kudityaniswa kwiprosesa ye-Snapdragon 750G. Isebenza phantsi kwe5G SA / NSA iinethiwekhi, ukongeza ekuzeni neWi-Fi 6, iBluetooth 5.1, iGPS kwaye ine-headphone jack. Ukuvula kuphantsi kwesikrini.
Inenguqulo yamva nje ye-Android, eleshumi elinanye kunye nolwahlulo lwe-OxygenOS nje ukuba izihlangu zesixhobo, zihlaziye njengesiqhelo amaxesha ngamaxesha. Njengokuba oko kwakunganelanga, ithembisa iminyaka emibini yohlaziyo, njengoko kuya kuba njalo I-OnePlus Nord 5G, ethi nangona ifike nge-Android 10 ihlaziye kutshanje kwi-Android 11.
Entsha i-OnePlus Nord CE 5G yi-smartphone engasindi, yenzelwe ukuphatha epokothweni yakho ngaphandle kokuyiqaphela ngaphandle kwemilinganiselo yendalo. Ifowuni inobunzima obumalunga ne-170 yeegram, ngelixa imilinganiselo iyi-159.2 x 73.5 7.9 mm, enobunzima obungaphantsi kwe-8 yeemilimitha encinci.
I-OnePlus ithatha inyathelo elichazayo lokunika inkangeleko entsha yokubona ukuba umgca we-Nord 10 kunye ne-Nord 100 yenzelwe uluntu engadingi ukuchitha imali eninzi kwifowuni. Ubhejo kule modeli kukunika umsebenzisi itheminali ngamandla kunye nokuzithembaEli nqaku lokugqibela lelinye apho uphawu ligxininisa khona.
ENYE I-NORD CE 5G
ISIKHUMBUZO I-6.43-intshi ye-AMOLED / ireyithi yokuhlaziya: 90 Hz / HDR10 + / HD epheleleyo + (2.400 x 1.080 px) -Ratio 20: 9
INKQUBO I-Snapdragon 750G
IKHADI LEGrafiki Adreno 619
i-ram I-6/8/12 GB
UKUGCINWA KWANGAPHAKATHI I-128 GB / 256 GB
IKHAMERA EMVA I-64 MP ye-Sensor ephambili / i-8 MP ye-Super Wide Angle / 2 MP ye-Monochrome Sensor
IKHAMERA ENGAPHAMBILI Inzwa ye-16 MP
INKQUBO YOKWENZA I-Android 11 ene-OxygenOS 11
IBATTERI I-4.500 mAh ngokutshaja ngokukhawuleza kwiWarp Charge kwi30W
UQHAGAMSHELWANO I-5G SA / i-NSA / i-WiFi 6 / iBluetooth / i-GPS / i-headphone jack
ABANYE Iscreen somfundi weminwe
Ubungakanani kunye nobunzima 159.2 x 73.5 7.9 mm / 170 amagremu
El I-OnePlus Nord CE 5G sele ityhilwe ngokusemthethweni, iya kuthengiswa ngoJuni 21, ukubakho kwi-AliExpress portal. Ukongeza, kukho unyuselo apho uza kugcina ezimbalwa $ 20 kunye nesigqebhezana sesaphulelo, okanye yintoni efanayo, malunga ne-16 euro malunga.
Iyafumaneka ngemibala yeCarcoal Ink (emnyama), iSilver Ray (isilivere) kunye neBlue Void (luhlaza okwesibhakabhaka) kwaye amaxabiso abo asuka kwi-299 euros kwimodeli ye-6/128 GB, enye ye-8/128 GB inyukela kwi-329 euros kwaye i-12/256 GB inye inexabiso le-399 ye-euro (iyafumaneka ngeetoni ezintathu).
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-OnePlus Nord CE 5G ibhengeziwe nge-Snapdragon 750G kunye nexabiso elifikelelekayo ngokwenene
9 imidlalo yePinturillo yasimahla ye-Android